Kuhle kangakanani ukwakha izipikili zakho ekhaya? 4 izimfihlo
Ngaphandle kokunqunywa okungenakufinyeleleka kunzima ukucabanga ngomfanekiso wesifazane wesimanje. Kodwa, ngeshwa, akuwona wonke umuntu okwazi ukuhamba nsuku zonke e-salon ngezinqubo. Ungaba kanjani? Yenza konke wena nomkhaya. Lokhu kunzima kuphela ekuqaleni. Kuhle kangakanani ukwakha izipikili zakho ekhaya? Kunezimfihlo ezimbalwa.
Inombolo yemfihlo 1
Ngasiphi isandla uvame ukwenza umuthi womuntu kuqala? Ngokwezibalo, abesifazane abangu-90% baqala inqubo ngesandla sobunxele (kwesokunxele-isandla nangakwesokudla). Kungani? Ngakho kulula kakhulu. Yilapho imfihlo yokuqala ikhona khona. Yenza i-manicure, upende izipikili zakho kangcono kunokuba isandla sakho esibuthakathaka siholele. Okokuqala, fuse eyaneleyo yonke inqubo. Okwesibili, izandla azikhathali kakhulu. Okwesithathu, kuvela ngokunembile kakhulu. Ngabe kuhle kangakanani ukwenza izipikili? Uma unikeziwe ngokufanele, qalisa ngesibindi ukuwadweba ngakwesokunene.
Inombolo yemfihlo 2
Ingabe unake indlela owenza ngayo umuthi wakho womuthi? Uqala nini umunwe? Ngendlela ecasulayo noma ngaphandle kokungabaza? Imfihlo yesibili ukuthi udinga ukuqala ngeminwe encane. Yeka ukuthi i-manicure ehlanganisa i-nail polish. Kungani ngomunwe omncane? Ukuqala inqubo enjalo elula kulula kusuka ezincane kuya ezinkulu, kusuka elula kuya eziyinkimbinkimbi, kancane kancane. I-plateyili ye-nails yomunwe omncane incane, indawo yokusebenza iyinto encane. Ungakha kanjani izipikili zakho ekhaya ngokushesha? Zizwe ukhululekile ukuqala ukusebenzisa i-varnish kumunwe omncane bese uyaqhubeka. Shiya isithupha kuphela. Kuzo zombili izandla. Lezi marigolds zivame ukugcina, kuqala okokuhola, bese kuthi obuthakathaka. Ngakho kuyoba nzima ukugcoba noma ukulimaza ngengozi.
Inombolo yemfihlo 3
Ukuze uqinisekise ukuthi iminwe yakho ikhanya isikhathi eside ngezingubo ezingenasici, kudingeka wenze umsebenzi omncane wokuqala. Okokuqala, izipikili zidinga ukufakwa. Okwesibili, susa i-cuticle kude. Okwesithathu, susa isicwecwe esitokisini se-nail. Lokhu kungenziwa i-soft buff yezipikili zemvelo, bese ubaphatha nge-degreaser. Futhi-ke ungasebenzisa isisekelo sokwenza umuthi. Ngaphandle kwalo, awukwazi ukwenza, kungenjalo kukhona ingozi yokunqoba izipikili zakho ngezingulube zombala kusuka ku-varnish. Amafutha we-Cuticle angabhalwa emva kokuba konke ubuhle bufakwe futhi bumiswe. Indlela yokwenza izipikili kahle ekhaya ngokushesha? Sebenzisa ukoma okhethekile we-varnish. Kungaba umkhiqizo wamanzi, isibani se-LED noma isibani se-nail nge-LED encane. Ungasebenzisi i-hairdryer! Lokhu kuzomisa i-varnish, futhi kuyokwanda ngokushesha.
Inombolo yemfihlo 4
Zingaki izendlalelo ze-varnish ozisebenzisayo? Ukwenyuka kwamanoni kudlulile isikhathi eside, izendlalelo akufanele zibe ngaphezu kwezintathu. Kulezi, enye iyisisekelo. Uma i-varnish ilukhuni, kungcono ukuyibeka ungqimba oluncane izikhathi eziningana, ukuze ugcwaliseke. Ngaphambi kokuba upende izipikili zakho kahle - ungazitholela izithombe kumagazini ngezibonelo - khetha imibala embalwa eyisisekelo. Kusuka kubo, bese ukhetha ukhetho olufanele kakhulu kuwe. Ukugcoba ukukhanyisa ngezipikili, kungenziwa ukudweba ngezingubo zokuzivikela nge-ultra-gloss. Lokhu ngeke nje kusize ukuvikela ukugcoba kwakho, kodwa futhi ukunikeze ukudlala okukhethekile ekukhanyeni.
Ngakho-ke, kuhle kangakanani ukwenza izipikili zakho ekhaya? Ukucubungula izipikili, uzilungiselele isimbozo, ukubeka i-varnish. Shayela ukucindezela ekugcineni kwebhodlela ukususa ngokweqile. Uma usungile ngephutha i-varnish noma ufika kwi-cuticle noma uhlangothi lwe-roller, khona-ke suka ngokweqile ngamapensela womuntu noma i-cotton swab efakwe kulesisindo ukuze ususe i-varnish.
Izipikili ezikhonjiwe: izici, imibono ezithakazelisayo, ukuklama nezincomo
Kuyini ngqi: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Opti-Men (amavithamini): incazelo kanye nokubuyekeza
Indlela ukudweba Hercules? Ikhishiwe inqubo incazelo